माइग्रेन के हो ? कसरी जोगिने ? - स्वास्थ्य - साप्ताहिक
माइग्रेन के हो ? कसरी जोगिने ?
माइग्रेन एक प्रकारको टाउको दुख्ने रोग हो, जुन समय–समयमा दोहोरिरहन्छ । यस्तो पीडा प्राय: टाउकाको एक भागमा हुन्छ । टाउकोमा च्वास्स–च्वास्स घोचेजस्तो गरेर दुख्छ । माइग्रेन जसलाई पनि हुन सक्छ तर माइग्रेन पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी देखा पर्छ ।
माइग्रेनलाई वंशानुगत रोगका रूपमा पनि लिइन्छ । मस्तिष्कमा जैविक रसायनहरूको असन्तुलन हुँदा टाउको दुख्ने वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ । माइग्रेन हुँदा मस्तिष्कको काममा परिवर्तन आउँछ । यसले गर्दा रक्तनली तथा मस्तिष्क वरिपरिका नसाहरू सुन्निन्छन् ।
बढी मानसिक चिन्ता ।
चिया र कफीको अत्यधिक सेवन ।
समयमा नसुत्दा ।
गुन्द्रुक, तामा तथा सिसीमा राखिएको पुरानो अचारको सेवन ।
पीडा कम गर्ने औषधी बढी मात्रामा (पेनकिलर) प्रयोग गर्दा ।
माइग्रेन लामो समयसम्म रहने रोग हो । यसको लक्षण बिरामीपिच्छे फरक–फरक हुन सक्छ ।
तीमध्ये प्राय :
टाउकाको एक भागमा मात्र दुख्छ । करिब एकतिहाइ बिरामीमा पीडा टाउकाको दुवै भागमा समेत हुन्छ ।
टाउकाको कहिले एकतिर त कहिले अर्कातिर दुख्छ ।
कहिलेकाहीं निधार र घाँटीतिर पनि दुख्ने समस्या हुन सक्छ ।
वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, उज्यालो प्रकाश आदि सहन नसक्ने, हातखुट्टा दुख्ने आदि समस्या देखा पर्न सक्छ ।
टाउको दुखाई बल्झिनुभन्दा अघि कसैकसैमा चिड्चिडाहट्पन देखा पर्ने, निद्रा लागेजस्तो हुने, लगातार हाई–हाई आउने, थकाइ लागेजस्तो हुन्छ ।
टाउको दुखाइ सकिएको करिब २४ घण्टासम्म बिरामीले थकान महसुस गर्छ भने मन्द टाउको दुखाइ कायमै रहन्छ ।
माथि दिइएका कारणहरूबाट माइग्रेनको अनुमान लगाउन सकिन्छ । माइग्रेनका लागि अन्य कुनै जाँचको आवश्यकता पर्दैन । यदि माथि दिइएका लक्षण बिरामीको टाउको दुखाइसँग मेल खाँदैनन् भने चिकित्सकले मस्तिष्कसम्बन्धी अन्य कुनै परीक्षण गराउन सक्छन् । जस्तै एमआरआई, सिटी स्क्यान आदि ।
माइग्रेनको कुनै निश्चित उपचार नभए पनि हामी स्वयंले केही उपाय अपनायौं भने पीडाबाट धेरै हदसम्म मुक्त रहन सक्छौं ।
माइग्रेन क्याफिनले गर्दा बढ्ने भएकाले क्याफिन पाइने कुराहरू जस्तै चिया, कफी, ब्राउन चकलेट आदि कम मात्रामा खानुपर्छ ।
एउटै समयमा सुत्ने बानी बसाउने ।
पुुरानो अचार, गुन्द्रुक, तामाजस्ता खानेकुरा नखाने, साथै पिरो कम खाने ।
चिन्तालाई मनबाट हटाउने ।
घाममा धेरै बेर नबस्ने, यदि घाममा हिंड्नुपरे छाता प्रयोग गर्ने ।
पीडा कम गर्ने औषधी कम प्रयोग गर्ने । यस्ता औषधी बढी सेवन गर्दा टाउको दुखाइ केही कम हुन्छ तर फेरि बल्झिन्छ ।
पीडा बढ्ने कारण
केश रंगाउँदा ।
केशमा पुरानो मेथी र तेल लगाउँदा ।
राति समयमा नसुत्दा ।
कसै–कसैलाई च्याउ खाँदा पनि माइग्रेन बल्झिएको पाइन्छ ।
मनमा धेरै कुरा खेलाउँदा ।
(डा. पंकज जलानसँग नरेन्द्र रौलेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित :माघ १२, २०७३
शीघ्र स्खलन कसरी रोक्ने
थोरै पिउनु स्वास्थ्यका दृष्टिले राम्रै हो आश्विन २९, २०७५
मासु किन कम खाने ? दूध किन बढी खाने ? श्रावण १२, २०७५
वर्षाका स्वास्थ्य समस्या श्रावण ७, २०७५
ढाडको दुखाइ र पीडा कम गर्ने उपाए असार २७, २०७५
अर्गचर्म काटिएकोमा यौनांग समस्या कम जेष्ठ ३०, २०७५
परिवार नियोजनको कुन साधन प्रयोग गरु जेष्ठ २२, २०७५
गर्भावस्था, एन्टिबायोटिक्स सेवन र शिशुको स्वास्थ चैत्र २०, २०७४
नौकासन चैत्र ५, २०७४
३ महिने सुई र महिला स्वास्थ्य फाल्गुन २०, २०७४
झाडापखालाका बारेमा फाल्गुन ७, २०७४